Fifanaovan-tsonia: haodina atao zezika ny diky eny amin’ny Station forestière Marohogo | Région Boeny
Notanterahina tao amin’ny Lapan’ny tanànan’i Mahajanga, ny Alarobia 11 Martsa 2015, ny fanaovan-tsonia mikasika ny famindram-pitantanana ny ampahany amin’ny tanin’ny fikambanana katolika Don Bosco amin’ny Kaomina ambonivohitr’i Mahajanga.
Ampahan-tany mirefy iray hekitara misoratra amin’ny fikambanana katolika Don Bosco miasa eto Mahajanga io natolotr’ity farany ny Kaomin’ny ambonivohitr’i Mahajanga io. Ao Marohogo, izay faritra harovana ao amin’ny kaominina ambanivohitr’I Belobaka, Distrikan’i Mahajanga II no misy izany tany izany.
Hanorenana fotodrafitr’asa ho an’ny Kaomina ambonivohitr’i Mahajanga ho fandraisana ireo diky hahodina ho zezika io teorana io. Izany dia vokatry ny fiaraha-miasan’ny Kaomina amin’ny any ivelany, amin’ny alalàn’ny fikambanana frantsay IRCOD (Institut régional de cooperation-développement) avy ao Alsace, izay mpiara-miombonan’antoka amin’i Mahajanga efa an-taonany maro.
Nisy araka izany ny fanaovan-tsonia nataon’ny Filohan’ny Delegasiona manokan’ny Kaomina ambonivohitr’i Mahajanga, Atoa Heriniaina Tia Solofomanga sy ny Lehiben’ny Distrikan’i Mahajanga II, Atoa Fidimiafy Jean Marc, nanamarina ny fanolorana io am-pahantany ao Marohogo io.
Marihina fa ankoatra io dia efa niara-niasa tamin’ny tetik’asa ASSMA (Assainissement Mahajanga) ny kaomina Mahajanga ny taona 2012 tamin’ny fanatsarana ny fanadiovana sy fidiovana eny anivon’ireo Fokontany marefo amin’ny faritra iva manodidina ny tatatra lehiben’ny honahona Vallon de Mitzinger Mahajanga.
Ny Faritra Boeny, ny Foibem-paritry ny Tontolo ianana, ny Ekolojia sy ny Ranomasina ary ny Ala eto Boeny, ary ny kaomina ambanivohitr’I Belobaka dia manana andraikitra amin’izao famindram-pitantanana izao fa mbola tsy nahavita ny fanaovan-tsonia, izay ho tanterahina amin’ny fotoana manaraka hoy ireo mpiara-miombonan’antoka.